Ukwenza Icala le-WordPress ku-Enterprise: Ubuhle Nobubi | Martech Zone
Ukwenza Icala le-WordPress ku-Enterprise: Izinzuzo Nezingozi
NgoLwesihlanu, ngoJuni 24, i-2016 NgoLwesibili, Novemba 24, 2020 Douglas Karr
WordPress.org ikhula ebhizinisini, esetshenziswa kuyo yonke imikhakha emikhulu kulezi zinsuku. Ngeshwa, amabhizinisi amakhulu asadlula i-WordPress ngenxa yedumela lawo njengebhizinisi elincane noma ipulatifomu yokubloga ezimele. Eminyakeni yamuva, abazinikezele I-WordPress ephethwe ukusingathwa amapulatifomu aguqukile. Safudukela e- ligcina uthi lokuphotha luzungeza ngoba Martech Zone futhi ngijabule ngemiphumela.
Kunobuhle nobubi bokusebenzisa i-WordPress ku-Enterprise. Ngingafanisa isipiliyoni seWordPress nokujaha. Unemoto (WordPress), umshayeli (abasebenzi bakho), injini yakho (izingqikithi nama-plugins), nomgwaqo wakho wokujaha (ingqalasizinda yakho). Uma noma iyiphi yalezi zinto ilahlekile, ulahlekelwa umjaho. Sibuke izinkampani eziningi ezinkulu zehluleka ngokufuduka kwe-WordPress futhi sisole i-WordPress; noma kunjalo, asikaze siyibone inkinga yangempela WordPress.
Izinzuzo ze-WordPress ze-Enterprise
Training - Uma udinga noma yiluphi usizo, i-WordPress.org inethani lezinsizakusebenza, i-Youtube inethoni lamavidiyo, kunezinhlelo zokuqeqesha kuyo yonke iwebhu, futhi iGoogle iphumela ezigidini zama-athikili. Ingasaphathwa eyethu Izihloko ze-WordPress, kunjalo.
Kalula Yokusebenzisa - Yize kungahle kungabi lula ekuqaleni ukwenza ngokwezifiso, ukukhiqiza okuqukethwe kwe-WordPress kuyisifinyezo. Isihleli sabo sinamandla amakhulu (yize kungikhathaza ukuthi izihloko ze-h1, h2, ne-h3 nezihlokwana namanje akukakwenzi kube ikhodi).
Ukufinyelela Ezinsizakalweni - Ukucinga ezinye izinsiza zokuthuthukisa i-CMS kungaba yinselelo yangempela, kepha nge-WordPress bakuyo yonke indawo. Isexwayiso: Lokho futhi kungaba yinkinga… kunabathuthukisi abaningi nama-ejensi athuthukisa izixazululo ezimbi kakhulu laphaya zeWordPress.
Ukuhlanganiswa - Uma uzama ukufaka amafomu noma ukuhlanganisa cishe noma yini, ngokujwayelekile uzothola ukuhlanganiswa okukhiqizwayo kuWordPress kuqala. Cinga ifayela le- isiqondisi se-plugin esigunyaziwe noma isayithi elifana ne- Ikhodi Canyon, akukho okuningi ongeke ukuthole!
Ukwenza ngokwezifiso - Izindikimba ze-WordPress ', ama-plugins, amawijethi nezinhlobo zeposi langokwezifiso zinikeza inani elingenamkhawulo lokuguquguquka. I-WordPress isebenza kanzima ukuze ibe ne- uchungechunge lwama-API ehlanganisa zonke izici zepulatifomu.
Ububi be-WordPress yebhizinisi
Ukuthuthukisa - I-WordPress yi okuhle Ngaphandle kwebhokisi uma kukhulunywa ngokusetshenziswa kwenjini yokusesha, kepha akukuhle. Kamuva nje bangeze amamephu esayithi kubo I-plugin ye-Jetpack, kepha ayinamandla kangako Ama-plugins we-Yoast's SEO.
Performance - I-WordPress ayinakho ukulondolozwa kwedatha nokugcinwa kwesikhashana kwekhasi, kepha ungakwenza lokhu kalula ngokusebenzisa i-Managed WordPress Host. Ngingadinga noma yisiphi isixazululo ukuze ngibe nezipele ezizenzakalelayo, ukulondolozwa kwesikhashana kwekhasi, amathuluzi e-database, izingodo zamaphutha kanye ne-virtualization ukuqinisekisa impumelelo yakho.
Izwe langaphakathi (I18N) - I-WordPress amadokhumenti ungazenza kanjani izingqikithi zakho nama-plugins zakwamanye amazwe, kepha entula ikhono lokuhlanganisa okuqukethwe okwenziwe kwasendaweni ohlelweni. Sisebenzise I-WPML ngalokhu futhi waba nempumelelo.
Security - Uma unika amandla i-25% yewebhu, uyisisulu esikhulu sokugenca. Futhi, okunye ukusingathwa okuphethwe kunikela nge-plugin ezenzakalelayo nezibuyekezo zetimu lapho kuphakama izingqinamba zokuphepha. Ngingancoma kakhulu ukwakha izingqikithi zezingane ukuze uqhubeke nokuvuselela itimu yakho yomzali osekelwa ukugwema ukubeka isayithi lakho engcupheni ngengqikimba engakwazi ukubuyekezwa.
Ikhodi Base - Izindikimba zivame ukwakhelwa umklamo omuhle, kepha zintula intuthuko eyindida yejubane, nokwenza kahle nokwenza ngokwezifiso. Kungaba kubi impela ukuthi womabili ama-plugins nezindikimba zithuthukiswa kanjani. Sivame ukuzithola sibhala kabusha ukusebenza kumatimu (esinye isizathu sokusebenzisa izingqikithi zezingane).
izipele - I-WordPress inikeza isisombululo esikhokhelwayo, VaultPress ngezipele ezingekho emthethweni kodwa ngiyamangala ukuthi zingaki izinkampani ezingaboni ukuthi akusona isici esivela ebhokisini futhi sidinga ukunikezwa umphathi wakho noma insizakalo eyengeziwe.
I-WordPress yenza inqubekela phambili ngamabhizinisi aphakathi nendawo naphakathi, nazi ezinye izibalo ezivela ku- onkulunkulu.
Tags: Ibhizinisii-wordpress yebhizinisiWordPressI-wordpress consubuhle be-wordpressubuhle nobubi be-wordpress
I-Pantheon: I-WordPress enzima noma i-Drupal Hosting nge-New Relic
Izeluleko Zokusebenzisa Ikhasi Lokufika Ezikhulisa Amanani Wokuguqulwa